M/weyne Farmaajo oo baaq deg deg ah ka soo saaray Dhuusa-Mareeb goor dhaw
July 21, 2020 NEWS 3
MUQDISHO(P-TIMES) – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka walwalsan nolosha qoysaska ku dhibaateysan degmada Afgooye iyo guud ahaan Shabeelaha Hoose ee uu ku fatahay Wabiga Shabeele ayaa ku baaqay in wadajir loogu istaago sidii loo samatabixin lahaa dadkeena dhibaataysan.
Intuu tago dee lugaha biyaha hala soo galo sidii Beled weyn, sawirna hayskaga soo gaado. kkk kkk kkk
Ina qoore taage says:
BEENLOW MA XISHOODO 4 SANO IGU SAWIR AH BAA WAQTIGII KAGA LUMAY. COD IYO QOF.BEEN AH BUU WAQTI KORDHIN KU RAADINAYAA.
Jaahilnimada dhibka ugu weyn ay leedahay waa qofka inaan maskaxdiisu qaybsame karin iyo inuu noqdo volunteer victim. Naftiisa u darnaade. Hadii Qabyaalad iyo qabwayne ku darsadana alle hasoo ururiyo waa ku daayeen kuwaas